Warshadaha Shiinaha iyo Wershadaha Wershadaha ee Shiinaha Jrain
Marka laga reebo taangiyada nooca dhululubo ee caadiga ah, Jrain waxay soo saartaa taangiyada muraayadaha muraayadda labajibbaarta leh ee lagu sameeyo habka loo-adeegsado (caaryada isticmaalkeeda) iyada oo la adeegsanayo hannaanka kor u qaadista, oo ay weheliso kuwa gudaha ah iyo dusha sare ee dibedda.
Cabbir ahaan: sida macaamiil kasta cabirkiisa
Taangiyada muraayadaha labajibbaarayaasha ah waxaa lagu habeyn karaa laguna soo saari karaa qaabab kala duwan, cabbirro, midabyo, dhumucyo, xaallado adeegyo la damacsan yahay, daboolid, qaabab kale, iwm.
Warshado badan oo kala duwan ayaa adeegsada haamo-afarge leh muraayadaha labajibbaarahooda nidaamyadooda:
1. Isku-dhafka taangiga, degto, laambiga iyo wixii la mid ah tamarta nukliyeerka iyo warshadaha qiijinta iyo macdanta.
Jrain wuxuu dejiyay degenayaasha qaab-dhismeedka mashaariic badan. Mashaariicda kaladuwan, resins kala duwan ayaa loo xushay inay la kulmaan shuruudaha adeegga kala duwan. Biyo-baxayaasha kala duwan sida budada kaarboon-ka ayaa sidoo kale lagu daray si ay ula kulmaan baahiyo kala duwan oo gaar ah.
2. Taangiyo laba geesood leh oo dhinacya badan leh oo loogu talagalay xalka dhirta.
Jrain waxay sameyneysaa welina waxay sameyneysaa dhowr haamo-weji afarta gees leh oo loogu talagalay ur adag oo la xariira howlaha kaladuwan ee daaweynta qashinka degmada. Injineerkeena waxaa sameeyay Injineerkeena iskaashatada kaas oo ah Injineer Kanada aqoonsan.
Taangiyada noocan oo kale ah waxay had iyo jeer ka kooban tahay internals dabiici ah oo la beddeli karo sida baffles, isku-dhiska, miraayadaha indhaha lagu arko, iwm.
3. Taangiyada caadiga ah ee loogu tala galay kaydinta iyo daaweynta biyaha.
Marka la barbardhigo alaabada birta ama tan birta ah, sheyga dhalada ah ee fiberlass-ka lagu xoojiyay (FRP) waxay leeyihiin faa'iidooyin badan.
Waa culeys aad u fudud, aad u xoog badan, waxaana lagu soo saari karaa cabbirro fara badan, oo saameyn toos ah ku leh kordhinta cimrigiisa rakibaadda iyo kaydinta kharashka.
Intaa waxaa sii dheer, FRP waa xulasho waara oo agab ah marka la barbar dhigo agab dhaqameedka, taas oo macnaheedu yahay in FRP ay bixiso faa'iidooyin muhiim ah marka loo eego iska caabinta nabaad-guurka, daweynta kiimikada, miridhku, iyo sidoo kale heerkul aad u hooseeya oo aad u sarreeya. Tani waxay ka dhigeysaa xalka waara oo qarashka dayactirka ee macaamiisha yaryahay.
Hadaad ubaahantahay muraayad fiberlass ah dhexroor / dhumuc dherer ahaan gaar ahaan, fadlan nagala hadal, anaguna waxaan sameyn karnaa wax walba.
Kooxda Jrain waxay ku dadaaleysaa inay siiso macaamiisheenna alaabo tayo leh iyo adeegga heerka koowaad ee isku xirka maareynta mashruuca si loo helo injineer farshaxan oo wax-soo-saar leh. Jrain waxay adeeg ku bixisaa shuruudaha gudbinta ee lagu heshiiyay iyo waqtiyada hogaaminta.
Hore: Haamaha Gaadiidka
Xiga: Taangiyada Taangiyada
Taangiyada Weelka Fibranka ee Fiberglass
Taangiyada Xannaanada FRP
Taangiyada Gorgolaha 'GRP Reankangular'
Taangiyada Faylasha Muraayadda Weyn
Taangiyada gaaska qaada ee loo yaqaan 'Fiberglass tank' waxaa muujinaya: Surface Dug jilicsan oo sahlan in la nadiifin karo; Xoog sare iyo iska caabin cadaadis sarreeya; Resistance Caabbi gabowga; Miisaan fudud; Ivity Dhaqdhaqaaqa kuleylka hooseeya; Storage Kaydinta heerkulka joogtada ah ee joogtada ah; Life Nolosha adeegga oo dheer, ku dhawaad ​​in ka badan 35 sano; Free Dayactir la'aan; Devices Qalabka kuleylka ama qaboojinta lagu dari karaa hadba sidii loo baahdo. Tayada ...
Jrain waxay leedahay farsamooyinkeena wax soo saar ee casriga ah ee u saamaxaya in taangiyada hal mar la wada qaado. Taangiyada noocan oo kale ah waxaa lagu soo saaray qaybo kala duwan oo lagu soo ururin karo goobta. Qolofka is dulfuulan ayaa loo kala qaadi doonaa iyada oo loo marayo qaab gaar ah oo iskugu xidhan goobta shaqada. Marka laga reebo faa'iidooyinka guud ee taangiyada muraayadaha muraayadaha indhaha laga sameeyo, taangiyada xirmooyinka waxaa sidoo kale lagu muujiyey: Dhibaatada gaadiidka waddooyinka la xalliyey; Farsameeyay qaybaha sida ugu badan ee suurta galka ah aqoon isweydaarsiga; Yareeyay fi ...
Habka caadiga ah ee haamaha waaweyn ee cabirka waa: 1. Abaabula kooxda wax soosaarka oo magacaw Maareeyaha Mashruuca; Mashiinnada iyo agabyada ugu rakib meesha mashruuca. 2. Dhexgeli mashiinka wareegaya iyo caaryada goobta mashruuca iyadoo loo eegayo dhexroor haanta la sameeyo. 3. Samee liner oo samee hawlo dabayl sida ku saleysan xogta loogu talagalay. 4. Muujinta ka dibna haanta ku rida meesha saxda ah. 5. Ku rakib qalabka korantada sida dhejiska, jaranjarooyinka, guntimaha gacmaha, iwm.
Taangiyadaha caadiga ah & maraakiibta, oo ay ku jiraan qaybaha dheeri ah, ayaa laga been abuuri karaa qaab kasta ama qaabeyn kasta, taasoo muujineysa dabacsanaanta ay ka mid tahay kuwa ka kooban FRP. Isticmaalida tikniyoolajiyadda iska leh, waxaan awood u leenahay soo saarista taangiyada iyo maraakiibta iyadoo la tixraacayo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha ee geedkayaga ka dibna si badbaado leh ugu gee goobtaada. Haamaha weyn ee waaweyn, waxaan awood gaar ah u leenahay inaan ku dhisno goobta-bartilmaameedkaaga gaarka ah ...
Haddii loo baahdo gaas-nasiin, waa hawl fudud in taangiyada lagu qalabeeyo 50mm PU lakabka xumbo oo ay ka go'an tahay 5mm FRP lakabka. Qaaciddani nidaamkan waxay soo saartaa qiimaha K oo ah 0.5W / m2K. Haddii loo baahdo dhumucda waa la hagaajin karaa, tusaale ahaan 100mm PU foam (0.3W / m2K). Laakiin dhumucda dahaarka guud ahaan waa inuu ahaadaa 30-50mm, halka dhumucda daboolida difaaca sare ay noqon karto 3-5mm. Haanta FRP waa xoog ka sarreeya kan birta, bir-tuurka, balaastigga iyo wixii la mid ah. Waxaa jira ...
Dhoolatus gacmeed, Fiberlass-ka Farsamaysan, Caaryada, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Mashiinka Dabaysha ee GRP,